(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 02/10/2020)
25 sq km yehlathi lomthi kunye nezilwanyana zasendle zikulindile kwi paki yedolophu enkulu eVienna. Hamba ekujikelezeni, jog, okanye ube nepikniki kule oasis eluhlaza, iya kwenza eyakho IsiVietnam iholide igqityiwe.
IYurophu igcwele iziganga. Nokuba uthini na manani amaxesha oye waya eYurophu, kuhlala kukho i-adventure entsha. Wethu 7 iidolophu ezibalaseleyo kwimisebenzi yangaphandle eYurophu zilungele abaxhamli kunye nabahambi abafuna umdla. Ukwengeza, kwabo bafuna ukujonga nje ubuhle bangaphandle kunye neembonakalo zomhlaba.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Izixeko ezi-7 eziGqwesileyo zokwenza imisebenzi yangaphandle eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/cities-outdoor-activities-europe/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)